निजामती सेवाका विशेषता केलाउदै यसमा रहेको चुनौतीहरु समेत उल्लेख गर्नूहोस । (लोकसेवा दर्पण )
नरेन्द्र पराजुली , २०७७ असाेज २, शुक्रबार,०८:५३:PM
विशिष्ट ज्ञान सीप र क्षमता भएका स्थायी प्रकृतिका राज्यको कोषबाट तलब भक्ता प्राप्त गर्ने गैर सैनिक, गैरराजनीतिक, व्यवसायिक, कानूनद्धार संरक्षित, पेशागत, तटस्थ समुह निजामती सेवा हो । यो मुलुकको सार्वजानिक प्रशासन संचालन गर्ने स्थायी संयन्त्र तथा सरकार र जनतालाई जोडने सेतुको रुपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरुको संरचना हो ।
निजामती सेवाका विशेषताहरु
सार्वजानिक प्रशासन संचालनको मियोको रुपमा रहेको निजामती सेवाका विशेषताहरुलाई निम्नानूसार उल्लेख गर्न सकिन्छ,
१. सेवाको कानूनी आधार भएको
२. स्वतन्त्र निकायबाट कर्मचारीको छनौट हुने
३. योग्यता प्रणालीमा आधारित
४. वृति विकासका निश्चित आधारहरु भएको
५. राजनीतिक रुपमा तटस्थ
६. स्थायी प्रकृतिको
७. गैर सैनिक तथा गैरराजनीतिक चरित्रको
८. निश्चित पदावधि र उमेरको हद भएको
९. दोहोरो उत्तरदायित्व भएको
१०. सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूती भएको
११. पदोसपानमा आधारित
१२. पुरुस्कार र दण्डको व्यवस्था
निजामती सेवामा रहेका चुनौतीहरु
निजामती सेवाका चुनौतीहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ
१. निजामती सेवामा योग्यता प्रणालीर र समावेशितालाई सँगसँगै लैजानु
२. खस्किदो जनविश्वासलाई दरिलो पारि सेवा प्रभावमा चुस्तता कायम गर्नु
३. निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्नु
४. प्रक्रियामुखि सेवालाई परिणाममुखि सेवामा रुपान्तरण गर्नु
५. अनुत्तरदायि र अपारदर्शि क्रियाकलापलाई हटाउनु
६. सरुवा,बढुवा,पदस्थापनका विषयलाई बस्तुपरक बनाउनु
७. सबै निकायहरुबीच उचित समन्वय कायम गर्नु
८. काममा भएको दोहोरोपना हटाई स्पष्ट कार्यदिशा पहिचान गर्नु
९. सकारात्मक भर्ना प्रणालीको अबलम्बन गरि श्रम बजारमा रहेका मेधावी जनशक्तिलाई भित्रीयाउनु
१०. सेवा प्रवाहमा भ्रष्टचारीताको सदाका लागि अन्त्य गर्नु
११. सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्रि बनाई कम समयमा गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभुत गर्नु
१२. राजनीति र प्रशासनिक तहबीच स्पष्ट कार्यक्षेत्र र अधिकारको रेखाङ्कन गर्नु
१३. वृति विकासलाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता र गुणस्तरीयतासँग मूल्याकन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु
१४. संघीयताको मोडल अनुसार सबै तह र दर्जाका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने गरि व्यवस्थापन गर्नु
निजामती सेवा सरकार र जनतालाई जोडने सेतु हो । तसर्थ यसको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कर्मचारिको मनोबल उच्च हुने गरि निर्धारण गरिनुपर्छ । साथै सेवा प्रवाह प्रक्रियामा नभई नतिजामा आधारित भई संचालित हुनपर्दछ ।